Yaa gooyay geedkaan!!! | Arimaha Bulshada
Yaa gooyay geedkaan!!!
June 22, 2007 at 6:51 pm | Posted in maqal | Leave a comment
Dhirtu guud ahaan waxay ka mid tahay saldhigyada nolosha aadamiga iyo noolaha kaleba. Aadamigu dhirta miraheeduu cunaa, dhirta qaarkeedna caleemaha iyo jirriddoodaa la cunaa. Dhirta waa la harsadaa, looxaan baa laga dhigtaa oo siyaabo kala duwan loo isticmaalo, ubaxa dhirtaa cadar laga sameystaa, xoolahaa iyaguna daaqa (quuta), shimbiraha iyo noolayaal kale baa iyaguna ku nool. Dhirta waxaa laga sameystaa dawooyin, hawada oksujiinka aanu u baahan-nahay bay soo tuftaa, xaabo iyo dhuxul baa laga dhigtaa markay qallasho. Siyaabahaas iyo siyaabo kaleba waa looga faa’iidaystaa dhirta.Meeshii ayan dhiri ka jirin ama aanan daaq lahayn waa lama degaan oo bacaad bay noqotaa,wayna adkaataa in lagu noolaado. Culimada qaarkoodna waxayba yiraahdaan;” dhirtu waa nolosha”. Meeshay ku badato dhirtu, nolol iyo dhaqdhaqaaq baa ka jira; beerahay ku wanaagsanaataa, xoolahaa daaq ka hela, mashaariic kala duwan oo dhirta iyo daaqa ku lug leh baa ka hirgeli kara ,oo shaqo joogta ah bay xoogsatadu ka heli karaan.
Dawladuhu badanaaba waa ku baraarugsan yihiin qiimaha iyo anfaca dhirta iyo daaquba, waxayna u samaystaan wasaarado, hay,ado iyo mashruucyo ku lug leh ilaalinta, horumarinta iyo ka mira-dhalinta deegaanka, dhirta, daaqa iyo kaymahaba. Dawladdii dhinacaas tixgelin fiican siin weyda, waxaysan garan kuwa ugu muhimsan tiirarka nolosha. Dawladaha qaarkood ruuxii geed gooya iyo kii ruux aadami ah dila, isku il bay ku eegaan. Xagga diintana waa arrin ku weyn, oo aayado quraanka kariimka ah iyo xaddiisyo Nebiga (nnkh) ah bay ku xusan yihiin geedaha iyo dhirtuba guud ahaan.
Soomaaliya dawlahihii kala duduwanaa ee soo maray min 1960 ilaa 1990kii, intii karaankood ah, kama aanay seexan dhankaas, si tabar iyo maaro loogu helaba. Hase yeeshee, markuu burburku dhacay baa talo faro ka haadday, waxaana soo baxay qooman (duulal) aad mooddo inay dhirta iyo daaqa la col yihiin, noloshana aanay wax qiima ah ugu fadhiyin, toodoo ay fushadaan mooyaane.
Deegaannada jiinka Webiga Shabeelle ku yaal, oo aan 2001-dii is-iri bal soo marmar, si aan wax uga ogaado; dadkii, dalkii, deegaankii, daaqii, duur-joogtii iyo dalaggiiba, baan magaalada Shalaambood xagga webiga uga sii socdaalay, anigoo markaasna soo xasuustay heestii: “Maxaad sheekadeennii, intaad shirisay dumarkii ugu sheegtay shalay galab. ha i sheegan inan yahay, shiddadiyo jacalkuba, intaan shaar u geliyaan, shalambood la tagiyoon, shib dheh oran, shar iyo khayr”. Beri-samaadkii heestu socotay baan gadaal u jalleecday xusuus ahaan.
Odayaal deegaanka aan kula kulmay, baa waxay ii sheegeen, arrimo yaab leh oo dhacay oo ay ka mid ahayd, sheekadan: Nin gaal ah(siday u yiraahdeen) oo hey’ad samafal ah la socda, baa ayaan dhoweyd jiiddan soo maray, wuxuuna ku arkay magaalada Jannaale ee jiinka webiga Shabeelle, geed weyn oo la gooyay, dhulkana yaal, loona darbinayo in la sii jarjaro. Intuu geedkii dhaqso ugu soo leexday buu dul-saaray qalab uu watay, markaas buu madaxa gacanta saaray, isagoo ilmaynaya, kuna qaylinaya: “..Yaa gooyay Geedkaan ?!! Maxaa loo gooyay?”. Markii la warsaday sababta, wuxuu yiri “..Anigu cilmiga dhirtaan ku xeel-dheerahay, geedkani wuxuu ka mid yahay geedo meelo kooban kaga dambeeya dunidan, waa nooc qiima badan oo jiinka webiyada qaarkood ka baxa, dhowr boqol oo sanuu gaaraa cimrigiisu, annagu si gaar ah baan u xannaanaynaa, idinkuna ma ciyaar-ciyaartan baad u jaraysaan …?!! Wuxuu ku soo celceliyay “Yaa gooyay ? Maxay u gooyeen ? Xaggay ka yimaadeen kuwa dhirtan oo kale jaraya …?!!
Akhristayaashaa laga rabaa jawaabta…